सडकका विषयमा विवाद चर्किएपछि कुटपिट, वडाध्यक्ष गम्भीर घाइते « Lokpath
२०७७, ४ माघ आईतवार २२:५९
प्रकाशित मिति : २०७७, ४ माघ आईतवार २२:५९
सिमकोट । हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्षमाथि हातपात हुँदा उनी सख्त घाइते भएका छन् । श्रीनगरको सडकका विषयमा छलफल हुने क्रममा विवाद चर्किएपछि वडाध्यक्ष रग थापामाथि हातपात हुँदा टाउको, मुख र शरीरमा चोट लाग्नाका साथै गम्भीर घाइते भएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत अदानचुली गाउँपालिका–१ को कार्यक्रम अनुगमनमा गएको समयमा एक्कासी वडाध्यक्ष थापामाथि ढुङ्गाले प्रहार भएको बताइएको छ । वडाध्यक्ष थापाले प्राविधिकको सर्बेविना श्रीनगरको सडक मनपरी ढङ्गले काट्न नहुने भन्दै सम्झाउन खोज्दा आफूमाथि एक्कासि ढुङ्गामुढा भएको बताए । सो घटनामा परी वडाध्यक्ष थापासहित तीनजना घाइते भएका छन् ।
घाइते हुने वडाध्यक्ष थापा, स्थानीय दीपक थापा र मक्क थापा गरी तीनजनाको अहिले स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा उपचार भइरहेको छ । यसभन्दा अगाडि साउन २२ गते नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पर्टी(नेकपा)का कार्यकर्ता बीच झडप भएको थियो ।
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेड र के. जि. एच ग्रूपबीच होटलका विशेष सेवाहरुमा
काठमाडौं । साँखु घर भएकी १८ वर्षीया किशोरीले सामाजिक संजाल (फेसबुक)बाट आफुलाई काकाले
मोरङमा ११ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार प्रयास, एक हप्तापछि मात्रै बाहिरियो घटना
काठमाडौं । मोरङमा ११ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कारको प्रयास भएको छ । मोरङको जाहदा
शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवा फुकुवा